Ilhaan Cumar Iyo Madaxweynaha Maraykanka Oo Dagaalkoodi Sii Durkay. – somalilandtoday.com
Ilhaan Cumar Iyo Madaxweynaha Maraykanka Oo Dagaalkoodi Sii Durkay.
(SLT-Washington)Waxaa wali taagan is-qabqabsiga u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump iyo Ilhaan Cumar oo Minesota ku matasha aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka.
“Waxaad la timid naceyb waligaaba kuugu jirtay oo aad u qabto Yuhuuda, Muslimiinta, muhaajiriinta, dadka madowga iyo dadka loogu yimid Mareykanka, waxaan wax ka bartay dad hadalkeygu uu noolashoodu saameeyay ee adigu gormaad wax ka baran?”. Sidaasi waxaa barteeda Twitter-ka ku qortay Ilhaan Cumar.
Ilhan ayaa sidoo kale aad uga soo hor jeedsatay nin uu madaxweyne Trump u magacaabay in uu noqdo ergeyga u qaabilsan dalka Venazuela. Waxay su’aal gelisay sida loo aamini karo Elliott Abrams oo loo magacaabay dalka Venazuela oo qalalaaso siyaasadeed ay ka taagan yihiin.
“Sannadkii 1991 waxaad qiratay in laba mar aad aqalka Kongreska ka qarisay maclumaad la xiriira ku lug lahaanshahaada fadeexaddii Iraan, mana garanayo sababto caddeyn walba oo aad maanta bixiiso ay run ku noqon karto”. Sidaasi waxaa Elliott Abrams u sheegay Ilhaan Cumar.
Muranka hadda taagan ayaa yimid kadib markii lhaan Cumar ay sheegtay in xildhibanaada aqalka Kongreska ee taageersan Israa’iil ay dhaqaale ka helaan kooxaha taageera Yuhuuda, arrintaasi oo sababtay in gudoomiyaha Kongreska, Nancy Pelosi ay raali geli ka dalbato Ilhaan Cumar.